Cusbooneysiinta - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
You are here: Bogga ugu weyn / updates
Go'aan ka gaarista waxaa lagu qeexaa iyadoo laga saarayo sharciyada ciqaabta isla markaana lagu xukumayo warshadaha jinsiga isla sharciyada iyo xeerarka khuseeya ganacsiyada kale iyo adeeg bixiyaasha. Haddii ay jirto hal shay oo dhammaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha galmada ay isku raacsan yihiin waa in shaqada galmada la xukumo. Halka qofna uusan weligiis sheegan in meesha laga saaray dambiile […]
Kala-sooca Fiktooriya: Sababaha Rajo-Weyn
Fikirkii ugu dambeeyay ee Fiktooriya ee sharciyadeeda ku saabsan shaqada galmada wuxuu ka bilaabmay 1985 koox la shaqeysa Waaxda Qorsheynta oo ay ku xigto Neave Enquiry for Prostitution taas oo ka dhalatay Sharciga Sharciga Dhillaysiga ee 1986 iyo markii dambena, Sharciga Shaqada Galmada ee Gudaha 1994. Shaqada galmada gudaha waxay sharci ka noqotay galmo diiwaangashan shaqaalaha iyo guryaha dhillaysiga ee shatiyeysan. Waqtigaas […]
3CR Raadiyaha Bulshada wareysi lala yeeshay Codadka Shaqaalaha Galmada Victoria
Cheryl Overs (mid ka mid ah aasaasayaasha dhillayaasha 'Collective of Victoria and Scarlet Alliance) iyo Estelle Lucas (aasaasaha Red Files) waxay ka wada hadlayaan faahfaahinta iyo sida aan uga qayb qaadan karno Dib-u-eegista Sharciga Shaqada ee 2020 ee Albaabbada Xiran ee leh 3CR. Wareysiga oo dhan ka dhageyso websaydhka 3CR Radio.
Fiona Patten: Waa maxay macnaha go'itaanka Victoria dhexdeeda?
Fadlan uga tag faallooyinkaaga iyo su'aalahaaga qeybta faallooyinka fiidiyaha ee Vimeo ee Fiona Patten si aad uga jawaabto fiidiyowga lasocodka.